Ahoana ny fomba ahafahanao mampiasa fitaovana mahazatra Amazon-tsara?
Ity lahatsoratra fohy ity dia natokana ho an'ny fitaovam-pambolena amazonin'i AMS. Tena zava-dehibe ny hiresahana momba ity lohahevitra ity noho ny "fifandraisana akaiky amin'ny mpifaninana", ny mpivarotra an-tserasera amin'ny aterineto amin'izao fotoana izao.
Amazon Marketing Services (AMS) dia manome mpivarotra an-tserasera amin'ny tombontsoa maro ary manome azy ireo fahafahana hijoro amin'ny mpifaninana aminy ary hamaritra ny vokatra avo lenta amin'ny pejy am-pikarohana Amazon.
Ny mpivarotra amperinasa Amazon rehetra dia mahafantatra fa tsy mety ny miditra ao amin'ny lisitry ny kaontinao. Izany no antony maha-manan-danja ny mahatakatra ny fomba fampiasana fitaovana ambaratonga Amazon mba hahazoana tombony be avy aminy.
Nahoana ianao no mila mampiasa fitaovana fampidinana Amazon?
Araka ny efa nolazaiko talohan'i Amazona dia fivarotam-piadiana be mpifoka indrindra ny ankamaroan'ny mpifaninana ao amin'ny niche dia sombim-peo tokana, ary ianareo rehetra dia manome ny tombontsoa mitovy ihany sy manana ny lanja mitovy. Amin'ny tenim-pirenena hafa, ianao dia mihantona sy mihantona miaraka amin'ny mpifanolobodirindrina ao amin'ny varotra anao ary manana ny vintana mitovy amin'ny handresy ny boaty any Amazon. Ny mpanjifa mety ho azonao dia tsindrio amin'ny pejin'ny mpifaninana aminao, ary ho very ny fivarotana amin'ny fotoana iray. Izany no antony mahatonga anao 10 segondra handresenao mpikaroka iray hisafidy ny vokatrao.
Amazon Marketing Service dia hanampy anao hisarihana mpanjifa maro kokoa ary hampitombo ny fahitanao marika amin'ny Amazon. Ankoatra izany, dia mamela dokam-barotra amin'ny mpampiasa amin'ny dingana isan-karazany amin'ny fividianana tanjona. Manome anao fahafahana hahazo ny marika eo anoloan'ny mpivarotra an-tsena ao amin'ny Amazon amin'ny Amazon.
Ireo laharana an-dàlam-pandrosoana dia mamaritra ny anjara andraikitry ny marika, vokatra avy amin'ny orinasam-pifandraisana izay liana amin'ny vokatra manokana. Ny doka vokarin'ny vokatra toy izany dia manampy anao hitazona ny mety ho mpanjifa eo amin'ny sehatry ny fivarotana Amazonanao.
Amazon Marketing Services dia niorina tamin'ny endrika telo lehibe indrindra amin'ny Amazon-dokambarotra:
Ireo endri-pamokaran-dokambarotra rehetra ireo dia manana ny toerany ao amin'ny tontolon'ny fiovàn'i Amazona. Ny tetik'asa ara-barotra nahazoan-danja dia mitaky ireo fiasa telo ireo ary ireo karazana sokajy samihafa tsirairay.
Ny fikarohana loharanon-drakitra no miorina eo an-tampon'ny fivarotana varotra. Io no zavatra voalohany Ny mpampiasa dia mijery ny pejy valin'ny fikarohana ary mivantana mivantana amin'ny mpikaroka mividy fanapahan-kevitra.Ny tsara indrindra dia ny fikarohana ny sokajy marika sy ny ankapobeny. Ny doka fikarohana lohateny dia manana endri-tsoratra voafaritra sy lahatsoratra maromaro mifandraika amin'izany.
Ny fanavahana ny tombontsoa fototra azo raisina amin'ny adiresy fotsifetana lohateny dia sarotra. Ny fahafahana mitantana ny tsindry ho amin'ny zavatra hafa ankoatra ny pejy antsipirihan'ny vokatra
Vokatry ny vokatra vokatra
Ny dokambarotra avy amin'ny vokatra dia mety ho karazana roa - automatique sy manual. Ny voalohany dia con Ny tranokely dia voatery, raha ny faharoa kosa dia adika fototra. Ireo doka ireo dia napetraka ao amin'ny TOP na ny sisin'ny pejy valim-pikarohana Amazon raha mampiasa birao iray ianao ary amin'ny pejy antsipirihany momba ny vokatra rehefa mampiasa fitaovana finday ianao. Ny dokam-barotra voafantina dia heverina ho dokam-barotra afovoan-drivotra rehefa miseho eo anoloan'ireo mpanjifa mety izy ireo rehefa mampitaha safidy hafa azo vidiana.
Ireo dokam-barotra ireo dia tsy misy afa-tsy amin'ireo mpivarotra fa koa amin'ireo mpivarotra rehetra any Amazonia. Afaka mamorona haingana azy ireo ianao ary mahazo fankatoavana haingana ihany koa.
Ity fampielezan-kevitry ny dokambarotra ity dia mitovy amin'ny fivarotana Google satria ny dokambarotra dia ho an'ny vokatra manokana. Ankoatr'izay, Amazon dia mandray anjara ihany koa amin'ny fiheverana ny vokatrao amin'ny fangatahan'ireo mpampiasa, ny politikam-pizahanao, ny hevitra sy ny fivarotana.
Ny tsara indrindra amin'izany dia ny fahafahana mifidy eo amin'ny karazan-tarehy sy sari-tanety..Rehefa mandefa ny dokambarotra ho azy ianao, Amazon dia mampiasa ny vaovao azo ampiasaina mba hifanaraka amin'ny dokam-barotra amin'ny dokambarotra miaraka amin'ny teny fikarohana indrindra. Amin'ny tranga iray rehefa mihazakazaka ny dokam-barotra ianao dia afaka mandefa lisitry ny teny fikarohana izay ahafahanao mifantoka ny dokam-barotra momba ny vokatrao. Ireo fanentanana an-tserasera dia manana ny vidiny avo lenta isaky ny klioba, fa manome safidy tsaratsara kokoa, raha afaka manokatra mora foana ny fampielezan-tserasera ary miseho amin'ny isan'ny mpikaroka.
Tsy afaka mifidy aho na amin'ny dokam-barotra na amin'ny dokam-barotra. Samy mahasoa ny raharaham-barotrao izy ireo, noho izany dia manoro hevitra mafy aho fa hampiasa azy ireo amin'ny sehatra iray.
Anisan'ny fepetra voalazan'ny Amazon Products manokana isika, afaka manavaka ireto manaraka ireto:
kaonty iray mpivarotra amoron-dalana taloha;
Fahafahana hitaterina any amin'ny adiresy rehetra any amin'ny faritanin'i Etazonia;
Ny vokatra lisitra dia tokony hiorina amin'ny sokajy maromaro;
Tsy tokony hividy afa-tsy vaovao sy tany am-boalohany fotsiny ianao;
Tokony hamorona ny dokambarotra raha tsy amin'ny lisitra misy amin'ny boaty fividianana. Raha tsy izany, ny dokam-barotrao dia tsy hiseho amin'ny mpanjifa mety ho an'i Amazon.
Tokony hividy ny vokatrao any amin'ny iray amin'ireto firenena manaraka ireto ianao - Etazonia, Angletera, Kanada, Alemana, Frantsa, Espana, Italia ary Shina.
Ny dokam-barotra amin'ny dokam-barotra
Ny dokam-barotra amin'ny vokatra dia miorina amin'ny faran'ny fivarotana varotra ary tsy hita amin'ny takelaka antsipirihany. Io no fotoana farany ahafahanao mikarakara ny mpanjifa mety hividy.
Izany karazana dokam-barotra izany dia mety ho lasibatra amin'ny karazana vokatra izay hividianana ny mpanjifa na ny safidiny ankehitriny na ny safidy ankehitriny. Ny famokarana vokarin'ny vokatra dia manome fahafahana anao hamantatra izay tadiavin'ny pejy tianao hampidirinao. Azonao atao, ohatra, ny mampiseho ny vokatrao ao amin'ny pejin'ny tranonkala fifaneraserana, manome Amazon amin'ny finday tsotsotra amin'ny vidiny mety. Na dia izany aza dia ilaina ny milaza fa voafetra ny halafon'ny taranjam-pandaharana raha mila mifidy ireo zavatra tianao hipoitra ny dokam-barotrao.
Amin'ny fe-potoam-piasany, ny tanjona kinendry dia afaka mitahiry bebe kokoa marobe fa amin'ny kely lavitra noho izany. Ny fampiasana an'ity karazana dokam-barotra ity dia azonao atao ny mampiseho ny vokatrao amin'ny mpampiasa izay mijery ny sokajy manokana na ny zavatra mifandraika amin'izany sokajy izany Source .